Erdősmecskei Yurt yokuhlala
Intente sinombuki zindwendwe onguImre
Kwabo bathanda ubomi bokuhambahamba, siye sakha le yurt ehlangabezana nobudala kunye neemfuno. IYurt inazo zonke izibonelelo kunye "neempumelelo" zeminyaka, ezifana nombane, ibhafu eshushu, ikhitshi elixhotyiswe kunye nesitulo esiphezulu. Ngeembono ezintle zeenduli zePannonian, amahlathi, amasimi kunye nezilwanyana zasendle kwiiNtaba zeMecsek. Ifikeleleka lula ngemoto.
Undwendwe lunokuhlala, luphile kwaye lulale kwindawo engcwele yeYurt. Unokupheka kwaye uhlambe ngokufanelekileyo ekhitshini elixhotyiswe kakuhle, eliphantsi kwesiqingatha sophahla ecaleni kwe-yurt, kwindawo yokuhlambela ngamanzi ashushu, apho izitena eziqinileyo zikhokelela khona. Isakhiwo esahlukileyo sisitulo esinomthunzi.
Olona phawu lukhethekileyo lwendawo yokuhlala kwiYurt kukudityaniswa okusempilweni kobuhambi kunye neemfuno zabantu banamhlanje. Konke oku phakathi kweentaba kunye neentlambo zelizwe lasePannonian elingaphazamisekiyo. Nceda usebenzise iziliphu ezikwiYurt.
Ikhitshi kunye negumbi lokuhlambela liphantsi kophahla olujonge ngasezantsi, ecaleni kweYurt. Indlu yangasese yi-bio budi eqinisekisiweyo, apho sikucela ukuba usebenzise i-shavings kunye ne-sawdust. KwiYurt, ngelishwa, asinakuvumela izinja ukuba zingene okanye sizingenise. Oku kungenxa yokuba sesichengeni kwemigangatho ebuthathaka kunye neerka kunye nezikhumba zebhokhwe. Nangona kunjalo, kuyenzeka ukuba uqeshise inja yenja eziswayo (1500 ft / ebusuku), enokubekwa kanye ecaleni kweyurt, kodwa ebet kufuneka ibotshelelwe kwityathanga.
Iindwendwe zinokundifumana nangaliphi na ixesha kwi-30-915 6810 okanye endlwini yam i-300 yeemitha kude.